I-Annex Enkulu Yesitezi Esiphezulu Emibhede engu-2 enamachibi angasese
Essex, England, i-United Kingdom
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Emma
*I-Swimming Pool manje isivaliwe ebusika izotholakala futhi ngo-April*
Ekhaya kusuka ekhaya! Isijobelelo semibhede emi-2 esitezi esiphezulu sibekwe endaweni enhle yasemaphandleni yepulazi lezithelo elidala e-Onslow Green, e-Essex.
I-Annex ibekwe endaweni enhle yekhaya lethu, isakhiwo sihluke ngokuphelele ekhaya lethu futhi siyazihlola futhi sihlole ukuze izivakashi zithole ubumfihlo obuphelele. Sicela uqaphele ukuthi i-Annex itholakala ngaphezu kwe-carport yethu futhi iyifulethi eliphezulu, ukufinyelela kungesitezi kuphela.
Uma ufuna ikhaya kusuka eholidini lasekhaya ke lena yindawo yakho. Jabulela ukuphumula endaweni enokuthula ye-idyllic kude nomhlaba omatasa. Ukusetshenziswa kwedamu lokubhukuda elishisayo kufakiwe phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho kuze kube ngu-8:30pm kusihlwa. I-pool ifinyelelwa yingadi engemuva isango engalithola ngakwesokunxele se-carport. Sicela uqaphele ukuthi iyichibi lesizini ngakho ngeke livulwe ngo-Okthoba-April.
I-Annex ibeka engcupheni ikhishi/indawo yokudlela enkulu enempahla ebalulekile efana nehhavini/ihobhu, i-microwave, ifriji, ifriji, umshini wokuwasha izitsha, i-toaster, i-microwave, i-cutlery, izitsha nezitsha.
Ngaphandle kwekhishi kukhona igumbi lokuhlala elikhulu eline-Smart TV kanye nezicabha zepatio eziphumela endaweni yokuhlobisa yangasese enezihlalo ezithile.
Kunamakamelo angu-2 umaster une-king bed ne-en-suite kanye ne-Aircon, elesibili yigumbi elincane elinemibhede yabantu ababili kanti womabili amagumbi akhelwe kumawodilophu.
Kukhona nensizakalo enomshini wokuwasha kanye ne-Tumble Dryer kanye nendlu yangasese eyengeziwe yezivakashi zekamelo lesibili.
Uzokwazi ukufinyelela i-WI-FI Yamahhala efulethini, imininingwane yokungena inikezwe kuphakethe lemininingwane ngaphakathi kwefulethi.
Siyabathanda izilwane ezifuywayo, wamukelekile ukuletha abangani bakho abangcono kakhulu! Sicela uvele usazise lapho ubhukha. Kuningi ongakuhlola!
I-TV ene- Fire TV, I-Netflix
4.92(146 okushiwo abanye)
4.92 · 146 okushiwo abanye
Indawo enokuthula, ebukekayo, uma ufuna indawo yokuhlala enokuthula yangasese, le yindawo
Sizotholakala zikhathi zonke